Kooxda Ull/Kiisa oo sagootin qurux badan u sameysay captankii hore ee xulka Soomaaliya. - NorSom News
Kooxda Ull/Kiisa oo sagootin qurux badan u sameysay captankii hore ee xulka Soomaaliya.
Kooxda Ull/Kiisa ee ka dhisan duleedka Oslo ayaa kulan sharafeed macsalaameyn ah u sameysay Ciise Abshir Midnimo oo ahaa captankii hore ee xulka qaranka Soomaaliya, sadexdii xili ciyaareed ee ugu danbeysayna katirsanaa kooxda Ull/kiisa.
Ciise ayaa sanadkii 2017 kusoo biiray kooxda kubada cagta Ull/kiisa oo ka ciyaarta horyaalka heerka labaad ee kubada cagta Norway, wuxuuna ka yimid kooxda KFUM ee isla horyaalka heerka labaad.
Midnimo oo wareysi siisyay Wargeyska Sporten ayaa sheegay inuu kooxda Ull/kiisa iyo taageerayashooda uga mahad-celinayo xiligii uu kooxdaas ku qaatay, uuna ku faraxsanyahay inuu kamid noqdo taariikhda kooxda.
Maamulka kooxda ayaa dhankooda Midnimo oo khadka difaaca uga ciyaariyay sadex xili ciyaareed oo xiriir ah ugu mahadceliyay shaqadii adkeyd ee uu qabtay, waxeyna sheegeen inay guul usii rajeynayaan.
Ciise Midnimo oo horey ugu soo ciyaaray kooxda Lillestrøm ee horyaalka heerka koobaad ee Norway ayaa sheegay inuu qaatay lisenka macalinimo ee Yurub, qeybta dhalinyarada( Uefa B-Trener lisens), uuna sii iskuulada akademiyada macalinimada EUFA kasii qaadan doono tababaro iyo koorsooyin la xiriira noqoshada tababare.
Xigasho/kilde: Sporten.no, Ull/Kiisa.no
Previous articleKooxda Rosenberg oo qaadatay laacib 14 jir soomaali ah.
Next articleNRK: Waxaan “Innsyn” u helnay waraaqaha ay kala direen kooxaha isku heysta maamulka Tawfiiq.